KENYA Oo Saddex Jeer Soomaaliya Kaga Guulleysatay Dhinaca Diblomaasiyadda – somalilandtoday.com
Kaddib khilaaf diblomaasiyadeed oo muddo u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya, Muqdisho ayaa bishii November ee 2020-kii gaadhay go’aanno xidhiidh ah oo ku saabsan xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal.
Tallaabadii koowaad waxa ay sheegtay in Kenya ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, Kaddib waxa ay ceydhisay safiirkii Kenya u fadhiyay Muqdisho, ayada oo u yeedhatay safiirkeedii Nairobi. Intaas kuma simmin ee waxa ay sheegtay in ay cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jartay Kenya ayada oo xidhatay safaaraddeedii Nairobi, Kenyana u sheegtay in ay toddobo maalin dalka ugala baxdo diblomaasiyiinteeda.
Kenya waa inkirtay dhammaan eedaha ay Soomaaliya u jeedisay. Waxa ay sheegtay in ay ayna Soomaaliya ka helin war rasmi ah oo ku saabsan go’aannada ay gaadhay, hase ahaatee ay ka xun tahay in ay jartay xidhiidhkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay.
Shir doceedkaas waxaa la iskula gaadhay in guddi xaqiiqo raadin ah oo IGAD ka socda loo saaro arrinta muranka xuduudka ee labada dal.
Kenya kuma simman dadaalkeeda halkaas ee waxa ay waqti galisay guddigii xaqiiqo raadinta ee ay IGAD maacawday. Iyadoo ka faa’iidaysanaysa awoodda hay’adaheeda dowladeed, xidhiidhkeeda diblomaasiyadeed iyo saammaynteeda gobolka ayay awood u yeelatay inay ka dhaadhiciso guddigii xaqiiqo raadinta IGAD ajandaheeda. Waxa ay guddigaas waqti ku qaateen Nairobi iyo Mandheera oo Kenya ka tirsan, iyaga oo la kulmay masuuliyiin Kenyan ah oo ay ku jirto Wasiirka difaaca Kenya Monica Juma oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo diblomaasi rugcaddaa ah oo gaartay heer safiir iyo xoghaye joogto. Sidoo kale, saraakiisha ciidanka Kenya ayay la kulmeen oo diyaarad ay ciidanka Kenya leeyihiin ku geeyay xuduudda labada dal. Markii ay guddigu Muqdisho tageen, waa diideen in la geeyo Beled Xaawo.
Saddex dal oo ka mid ah siddeedaan dal waxa ay ku mideysan yihiin Bulshada Bariga Afrika (EAC), waana Kenya, Uganda iyo Suudaanta Koofureed. Saddex dal oo kale dhawaan ayay ku dhawaaqeen iskaashiga isdhexgalka dhaqaalaha geeska Afrika waana Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Jabuuti iyo Suudaan ayaan xulafo kale oo goboleed ku jirin marka laga soo tago xidhiidhka laba geesoodka ah.
Sidoo kale, Jabuuti waxaa dhul ka haysata Eritrea oo Soomaaliya kula jirta xulafada geeska Afrika. Dowladda Jabuuti ma qarin sida ay uga xun tahay in Soomaliya oo walaal la ah ay u ololeyso, lana heshiiso Eritrea oo xoog uga haysata dhul, ciidan badan la dishay, maxaabiis ay ka qabsatay ka inkirtay, walibana ku eedeysan oo lagu cunaqabateeyay in ay taageerto Al-Shabaab. Sidaas darteed, cadawgaaga saaxibkiis waa cadowgaaga. Kenya kuma jirto isbahaysiga Geeska Afrika ee ay Suudaan iyo Jabuuti ka cadhaysan yihiin.